कोरियाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपाली मजदूरको मार्मीक पत्र – Hotpati Media
कोरियाबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपाली मजदूरको मार्मीक पत्र
२ भाद्र २०७६, सोमबार ०५:५५ मा प्रकाशित (5 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ८ मिनेट
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू , नमस्कार !
कुनै समय महान् बैज्ञानिक ञथोमस् एल्बा एडिसन झ ले बिजुलीको वल्व देखेर संसारलाई उज्यालो बनाउने बिधुतको आविष्कार गरे , राइट ब्रदर झले आकाशमा उडेको चरा देखेर हवाईजहाजको आबिष्कार गरे , ञएलेक्स जेन्डर ग्रामबेल झ ले सँसारलाई नै साँघुरो पार्ने टेलिफोनको आबिष्कार गरे । पूर्व( पश्चिम रेल कुदाउने , सबैको घरघरमा ग्याँस पाइप जोड्ने , कोशीमा पानीजहाज चलाउने जस्ता सपना देख्नु अनावश्यक होईनन् । तर कुनै पनि सपना आफ्नो क्षमता, दक्षता र आवश्यकता अनुसार देख्नु जरुरी छ । अहिलेको परिवेशमा नेपालीले सहज र सुलभ तरिकाले यात्रा गर्न पाउनु , भनेको बेला ग्याँस उपलब्ध हुनु , करिब सानाठूला गरेर ६०० भन्दाबढी रहेका खोला नालाबाट नेपालीलाई आवश्यक पर्ने बिधुत उत्पादन गरेर लोडसेडिङ निर्मुल पार्न सक्नु बढि उपलब्धिमुलक कार्य होला |
‘धनवानको व्यापार , नङ्गाको भगवान् र भोगको राजनीति हो ।’ तर हाम्रो देशमा जस्ले जति चलखेल गर्न सक्यो ,जस्ले जति पैसा बाड्न सक्यो , जस्ले जनतालाई धेरै भ्रम फैलाउन सक्यो उहीँ नै राजनीतिको अग्रपंक्तिमा छ । विश्वको हरेक इतिहास कालखण्डमा महान राजनितिज्ञहरु जन्मिएका थिए र छन् । उनीहरूको योगदान अतुलनीय छ । जस्तो कि जज वासिङ्टनझ को पहलमा अमेरिका सम्पन्न भो , ञदिङ सि वाङ्दिझ को नेतृत्वमा चीन महान भो , ञबिटुर द गेरेटझ को प्रयासले रसिया विश्वविशाल भो , ञपार्क चुङ ली झ को योगदानमा दक्षिण कोरियाले छोटो समयमा विकासको छलाङ् मार्याे , लिक वान यु झ को सहि रणनीति र कार्ययोजनाले सिङ्गापुर ३० बर्ष भित्र तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा उत्रियो , ञ नेल्सन मन्डेलाझ को तपस्याले अफ्रिकाको अध्यारो हट्यो । दक्षिण अफ्रिका विश्वव्यापारको गन्तव्य बन्यो । नेपालले पनि धेरै राजनितिज्ञहरु जन्मायो । सबैको विवादित नाम लिउँ वा नलिउँ तर पृथ्वीनारायण शाह देखि अहिलेसम्म धेरै राजनीतिज्ञहरु जन्मिएका छन् । कति मारिए कति को टाइमिङ मिलेन भन्छन् । जस्तो कि बि.पी कोइराला र राजा महेन्द्र , मारिएकाको नाम लिदाँ मदन भण्डारी ! अब देशले कहिले स्पष्ट कार्यनीति, नेतृत्व र समृद्ध देशको खाका तयार पारेर देशलाई विकासतिर अग्रसर गर्ने नेता पाउछँ प्रधानमन्त्री ज्यू ? हजुर प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ भारतको नाकाबन्दीलाई प्रतिवाद गरेर चीनसगँ सम्झौता गरिरहदाँ नेपाली जनताले हजुरको गुनगान गाएकै हुन् । अब देशले सक्षम नेतृत्व गर्न नेता पायो भनेर जनताले हाईहाई गरेका हुन् । तर जुन हिसाबमा हजुरको प्रथम पटकको हाईहाई थियो । त्यो हाईहाई द्रोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ बाईबाईमा परिणत हुन थालिसकेको छ । जनताले हजुरप्रति गरेका आशाहरु निराशामा परिवर्तन हुन थालिसकेका छन् । हजुरले चुनावको बेला गरेका प्रतिज्ञा , बाचा र कबुलहरु जनताले हास्यास्पद उखानटुक्का का रुपमा लिन थालिसकेका छन् । नेपालको इतिहासमा अहिलेको यो बामपंथी दुई तिहाइ सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । विध्यादेवि भण्डारी राष्ट्रपति , के.पी शर्मा ओलि प्रधानमन्त्री ,रामबहादुर थापा(बादल) गृहमन्त्री ,गोभ्रनर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री , प्रदिप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री ,गोकर्ण बिष्ट श्रम तथा रोजगार मन्त्री हुदाँ देशले विकासको गति लिन सकेन भने नेपाली जनताले कस्को नेतृत्व हुदाँ र कहिले विकासको अप्रेक्षा गर्ने ?
पुँजीवादले ढयाप्पै ढाकेको समाज भनौ वा रोजगारको अभाब भनौ देशमा केहि सिप नलागेपछि म अहिले रोजगारको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा छु । म त एउटा प्रर्ति्निधि पात्र मात्र हो । ६० लाख भन्दाबढी युवायुवतीहरु प्रवासी हुन बाध्य छन् । म हजुरलाई एउटा सानो सम्बाद सुनाउन चाहान्छु । आजभन्दा केहिदिन अघि गाउँकै एकजना साथीसँग मेरो भेट भयो । उसले भन्यो , “ खै किन किन छोरी जन्मेपछि हिजोआज मलाई त घर जाऊ जाऊ जस्तै भको छ । काममा मन नि जादैन् यार ! फेरि घर जाऊ भनेपनि रोजगार छैन् । नजाऊ भने छोरीको कलिलो आखाँले बाबु खोजिरहेको छ । बाबाआमाको याद नि सारै आउछँ फेरि उनी नि उता एकलै एकलै म नि यता एकलै एकलै ।“ यो साथीका मनका व्यथा वास्तवमा सबै परदेशी युवाका व्यथा हुन् । भिडियो कल गरेर चित्त बुझाउदै आफ्ना छोराछोरी हुर्केको हेर्नुपर्ने पीडा धेरै परदेशीहरुको छ । छुट्टीमा घर जादाँ सानी छोरीले आफुलाई अँकल भनेर बोलाउदा परदेशीलाई कस्तो हुन्छ होला ? पासपोर्ट च्यातेर मिल्काउदै छोरीलाई छातीमा च्याप्दै छोरी म तिम्रो अँकल होईन् बाबू हो भन्न मन लाग्छ होला । तर के गर्नु हामी त्यो जाबो कागज च्यात्न सक्दैनौं । एउटा युवक आखाँभरि रहर बोकेर परदेश पुग्छ अनि तिनै आखाँभरि आशु र मनभरि यादहरु बोकेर बाचिरहन्छ । कसैका रहरहरु पूरा हुन्छन् त कसैका अधुरा ! कोहि बाकसमा रहर पुरा गर्ने धन बोकेर फर्किन्छन् त कोहि बाकसमा आफ्नै जीन्दगी बन्द गरेर फर्किन्छन् । दैनिक तीन चार जना नेपालीहरु परदेशबाट बन्द बाकसमा फर्किन्छन् ।
बन्द ठुलो बाकसमा
फर्कियो उड्दै आकाशमा
अन्धकार भयो गाउँघर
दियो निभ्दा प्रवासमा !
उसलाई हेर्दै पर्खेको बाटो रुन्छ कि रुदैन् ?
एउटा परदेशी मर्दा माटो रुन्छ कि रुदैन् ?
म जस्तो युवाले आफ्नो देशको स्थायी परराष्ट्रनीति नभएकोमा धेरै चिन्ता गरिन्! देशको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षानीति नभएकोमा कुनै चिन्ता गरिन्! यो देशको राष्ट्रिय दिन (ल्बतष्यलब िमबथ ) परिचान नभएकोमा चिन्ता गरिन्! यो देशको राष्ट्रिय पोसाक के हो ? राष्ट्रिय खाना के हो ? राष्ट्रिय खेल के हो ? राष्ट्रिय चरा के हो ? भनेर मैले चिन्ता गरिन भने चिन्ता कसले गर्छ ??? अनि पासपोर्ट बोकेर को बाहिर जान्छ ?? यो मेरो पुस्ताको चलन हो । यो मेरो पुस्ताको पीडा हो । यो मेरो पुस्ताको आक्रोश हो । …
यो मेरो पुस्ताको आशु हो र तपाई प्रति शब्दको ज्वाला पनि हो । हामीले सधै यसैगरी शब्दहरुको आक्रोशहरु पोखेर यो देशको विकास हुन्छ भन्न छाडिसकेका छौ किनकि यो देशको उच्चओहदामा रहेर नेतृत्व गर्नहरुसगँ देश विकास गर्ने मानसिकता छैन् , सङ्कल्प छैन् ,देशको प्रेम छैन् । हामी त्यस्तो राष्ट्रियताको पुजा गरिरहेका छौ जहाँँ जनता बिनाकारण मारिएका छन् , फसाईएका छन् । पैसा र राजनीतिक शक्तिको आडमा बलियाले निर्दालाई दबाएका छन् । व्यक्तिको शासन छ, सक्नेले मनपरितन्त्र गरिरहेका छन् । एक घन्टाको सम्बोधनमा नरेन्द्र मोदीले संसदमा भाषण गरेर हामीलाई सम्झाउनुपर्छ हाम्रो राष्ट्रियता ! जुम्लामा जडिबुटी छ , मुस्ताङमा स्याऊ छ , पोखरा पर्यटन का लागि आक्रर्षण गन्तव्य बन्नसक्छ । अझ उनले दिएको थेउरि पनि छ ज्क्ष्त् ( ज्थमचय ( ष्लायचmबतष्यल त्भअजलययिनथ) यो सबै उनको आवाजको घन्ले हाम्रो कानमा ठोकेपछि हामीलाई आफ्नो देशको धेरै माया लागेर आउँछ अनि हामी संसदमा क्या गड(गडले ताली बजाउछौ कसै कसैले त टेबुल पनि ठटाउछौ ।
ढकालको यात्रा : सहायक पदको जागिरदेखि सबैभन्दा ठूलो बैंकको अध्यक्षसम्म